I-Burren Glamping-cosy & ikhululekile & i-quirky
Ifama sinombuki zindwendwe onguEva
Ilori yamahashe eguqukileyo nethambileyo kwifama yesiNtu yaseIreland e-Burren, Co Clare, ngaphandle nje kwe-Wild Atlantic Way, kufutshane neCliffs yaseMoher, iZiqithi zeAran kunye neGalway City. Ulala abantu aba-5 ngokukhululeka, kodwa unokwenza indawo yomntu we-6 kunye ne-juggle encinci. Kushushu kwaye kuqaqambile ngaphakathi. I-Burren yindawo ekhethekileyo apho unokonwabela i-geology emangalisayo, i-archaeology, imbonakalo, imbali kunye nelifa lemveli kunye nezithethe zomculo. I-Kilfenora likhaya lomculo we-ceili, ubambelele kwisithethe
Ilori yethu yehashe yeediliya epholileyo ibekwe ngokusisigxina emadlelweni kwaye ngokuyilayo nangobuchule yatshintshwa yaba yindawo yokuhlalisa yasefama ekhethekileyo kunye nebespoke. E-Ireland siyibiza ngokuba 'yiGlamping' mfutshane ye-'Glamorous Camping'. Ufumana zonke izibonelelo zenkampu ngaphandle nabuphi na ubunzima. Ilori yeGlamping ikhululekile kwaye ibanzi- igqunywe ngokupheleleyo ngesitovu samaplanga esibaswayo kunye neshawa yombane kunye nendlu yangasese egungxulwayo. Iibhedi ezimbini eziphindwe kabini zilungile ngokwaneleyo phezu kwekhabhathi yelori kwaye ibhedi yokuhlalisa eyenziwe ngezandla iphindwe kabini njengebhedi engamawele, ngelixa isetyenziswa njengesofa emini.
Sime kwi-Burren kunye neCliffs yase-Moher Geopark, ngaphandle kwelali yaseKilfenora kwaye sonwabele indawo entle nenoxolo. Ilori yeGlamping ihlala kanye entliziyweni yefama, ilitye lokuphosa elisuka kwi-Iron Age egcinwe kakuhle, iTullagh Ringfort. Ukungabikho kongcoliseko lokukhanya kukuvumela ukuba ujonge inkwenkwezi kwaye ubumnyama ebusuku bukuvumela ukuba ulale kamnandi ebusuku.
IBurren, ngamanye amaxesha ebizwa ngokuba lilitye elichumileyo, yinxalenye yeWild Atlantic Way kunxweme olusentshona yeIreland. Inentyatyambo ekhethekileyo apho izityalo zeAlpine, iArctic kunye neMeditera zikhula ecaleni kweendawo kunye nezona ndawo zifikelelekayo zekarst emhlabeni, ezinokwakheka okumangalisayo kwejoloji kunye neentsalela zezinto zakudala. Simi kumda we-Burren, phakathi kwamadlelo atyebileyo, siqhuba ifama yakudala, ezinzileyo kunye ne-eco-friendly, singasebenzisi zichumisi okanye izibulali-zinambuzane apho intlalontle yezilwanyana ingundoqo. Siyinxalenye ye-Burren Ecotourism Network kunye neBurren and Cliffs ye-Moher Geopark. Ngo-2016 siye saphumelela imbasa yeNational Geographics 'World Leagcy Award' kwaye ngo-2015 ibhaso le-EDEN kuKhenketho lweNdawo kunye neGastronomy (iNdawo yokuGqwesa yaseYurophu).
UStephen, umamkeli-ndwendwe, yinzalelwane yale ndawo kwaye usebenze njengomkhenkethisi iminyaka engaphezu kwama-20 kwaye uyazi kakuhle le ndawo. Sinika iindwendwe zethu iingcebiso malunga nokuba zibone kwaye zenze ntoni kwindawo ngokwezinto ezinomdla kuzo kwaye sichaze indlela engcono yokufika apho. Ummandla unikezela kakhulu ukuba izinto ziya kuba namava ngokubhekiselele kwi-archaeology, imbali, ibhotani, i-geology njengoko siseBurren kunye neCliffs ye-Moher UNESCO Global Geopark. Mininzi imisebenzi ekhoyo efana nokusefa, ukukhwela inqanawa, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukukhwela amatye, ukukhwela amatye, ukutya, iyoga, igalufa njl.
Singamalungu aphumelele amabhaso amaninzi eBurren Food Trail kunye neBurren Ecotourism Network eliqela labavelisi bokutya kunye nendawo yokuhlala kunye nababoneleli bemisebenzi abanikezela ngamava awodwa asekuhlaleni. Singancedisa ngokubhukishela kuzo zonke ezi zinomtsalane zidumileyo umzekelo imbotyi kwibar yetshokolethi yefektri, i-salmon smokehouse, iwhiskey distillery, ifama yeoyster, ifama yetshizi yeebhokhwe, ifama yokwenza i-ice cream, ivenkile yokutya kwaselwandle, iBurren perfumery, iindawo zokutyela ezininzi eziphumelele ibhaso kunye negastro pubs. kunye nezinye ezininzi.
UStephen, umamkeli-ndwendwe, yinzalelwane yale ndawo kwaye usebenze njengomkhenkethisi iminyaka engaphezu kwama-20 kwaye uyazi kakuhle le ndawo. Sinika iindwendwe zethu iingcebiso…